Tim Cook kwuru na ihe mere na Melbourne bụ 'anaghị anabata ya' | Esi m mac
Tim Cook kwuru Apple Store Melbourne bụ 'adịghị anakwere'
Jesus Arjona Montalvo | | Apple Store, Noticias, ọtụtụ
Ndondo emi ke a Storelọ Ahịa Apple na Melbourne, Australia, wakporo dị ka ndị na-akpa ókè agbụrụ, ebe ụlọ ahịa ahụ ekweghị ka ụfọdụ banye n'ụlọ ahịa ahụ ka a ghara izuru ngwaahịa. Onye nche na mbido gbochiri ụmụ akwụkwọ si n'ụlọ akwụkwọ dị nso ịbanye n'ụlọ ahịa ahụ, ma emesịa onye ọrụ ụlọ ahịa Apple Store gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ihe kpatara na anaghị enye ha ohere ịbanye ebe ahụ. Ihe merenụ bụ vidiyo, na dị ka ndị dị otú ahụ, e mere ya malitere ịrịa ngwa ngwa. Apple rịọrọ mgbaghara ngwa ngwa maka ihe ahụ merenụ.
Na nzaghachi nke a merenụ, ozi email na nnọchite ụlọ ọrụ niile zitere site na Onye isi ọrụ Tim Cook, aha "Apple bụ oghe". O kwuru na etu esi edozi ọnọdụ ahụ "adịghị anakwere", na ọ gara n’ihu na-ekwu na ọ dịghị otu onye n’ime ndị ndu Apple nwere obi a withụrị na otu esi agba ihe.
Tim Cook gara n'ihu kwuo na omume ụfọdụ ndị ọrụ na ụlọ ahịa ahụ anaghị egosipụta Apple n'ozuzu ya, na ụlọ ọrụ ahụ dịkwa "Megheere mmadụ niile nke klasị mmekọrịta ọ bụla, na-enweghị ọdịiche nke agbụrụ ma ọ bụ okpukperechi, mmekọahụ ma ọ bụ mmekọ nwoke na nwanyị, afọ, nkwarụ, ego, asụsụ ma ọ bụ echiche".
Nwere ike ịgụ ozi email zuru oke n'okpuru, nke izizi biputere ya BuzzFeed:
Ekwenyesiri m ike na unu niile maara na ihe a na-adịghị anakwere nke mere na ụlọ ahịa anyị na Highpoint Mall na Melbourne, Australia na Tuesday a. Ọtụtụ ndị na-eto eto bụ ụmụ akwụkwọ si ụlọ akwụkwọ dị nso, ndị nche echekwala ha ma dịkwa njikere ịhapụ ụlọ ahịa ahụ. N’ịgbalị ịnagide ọnọdụ ahụ, otu n’ime ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ ahịa anyị nyere ọtụtụ n’ime anyị azịza juru anyị anya.
Ihe ndị mmadụ hụworo ma nụ na vidiyo anaghị egosi ụkpụrụ anyị. Ọ bụghị ozi anyị nwere ike ịchọrọ izi ndị ahịa anyị ma ọ bụ gee onwe anyị ntị. Onye ọrụ anyị gosipụtara mgbaghara ya ozugbo ma rịọ ụmụ akwụkwọ ahụ mgbaghara.
O nweghị onye n’ime anyị nwere obi ụtọ n’otú e si mee ya. Mana anyị niile nwere ike ịnya isi Kate, otu n'ime ndị isi nchịkwa na ụlọ ahịa ahụ Gosiputa ya.
N’otu ụbọchị Wednesde ahụ, o kelere otu ụmụ akwụkwọ ahụ iji gosi ezi mgbaghara maka ụlọ ahịa anyị na ụlọ ọrụ anyị. O mesiri ndị a na-eto eto obi ike na a ga-anabatakarị ha na ụmụ klas ha n’ụlọ ahịa anyị. Onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ mechara gwa onye nta akụkọ na ọ natara ozi ahụ site na Apple "obi ụtọ," otu n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ wee sị, "Ọ dị m ka anyị nwere ikpe ziri ezi."
Apple mepere. (Apple mepere).
Lọ ahịa anyị na obi anyị ghere oghe maka mmadụ niile ndụ, agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ okpukperechi, mmekọ nwoke na nwanyị ma ọ bụ mmekọ nwoke na nwanyị, afọ, nkwarụ, ego, asụsụ ma ọ bụ echiche ndị ọzọ. Ihe niile site na ụlọ ọrụ anyị, na-etinye ọnụ, ma na-anabata esemokwu anyị ka ngwaahịa anyị wee ka mma na ụlọ ahịa anyị na-esiwanye ike.
Storelọ Ahịa Apple na Highpoint (Melbourne) bụ ndị na-ekerịta ụkpụrụ ndị a na-eje ozi ma gosipụta ntinye anyị maka iche iche. Ndị otu a gụnyere ndị ọrụ ibe si Australia, yana Egypt, Italy, India, na mba ise ndị ọzọ. Ha niile na-asụ asụsụ iri na ise, gụnyere Portuguese, Arabic na Mandarin Chinese.
Ọ bụ ezie na m kwenyesiri ike na nke a bụ ihe dịpụrụ adịpụ ma ọ bụghị ihe mgbaàmà nke nsogbu sara mbara na ụlọ ahịa anyị, anyị ga-eji oge a dị ka ohere maka otu anyị niile ịmụ ihe na itolite. ndu Gburugburu ụwa, bido n’Ọstrelia, ọzụzụ gị n’ihe gbasara itinye aka na ntinye ndị ahịa ga-enye ume ọhụrụ. Ndị a bụ echiche na omume anyị maara nke ọma, mana ị nwere ike mgbe niile ume ọzọ.
Pectkwanyere ndị ahịa anyị ùgwù bụ ntọala nke ihe niile anyị na-eme na Apple. Ọ bụ ihe mere anyị ji kpachara anya na ịmepụta ngwaahịa anyị. Ọ bụ ihe mere anyị ji eme ka anyị tụlọ ahịa mara mma ma dịkwa mma, ma gbatịa iru ya iji baara obodo ndị bi gburugburu ya uru. Ọ bụ ihe mere anyị ji agba mbọ ime ka ndụ ndị mmadụ ka mma.
Daalụ niile maka nraranye gị nye Apple, ụkpụrụ anyị, yana ndị ahịa na anyị nwere nnukwu ihu ọma ijere ozi.
Ndo, echere m na emeela m ezigbo ntụgharị asụsụ, enwere m olileanya na ọ masịrị gị. GREETINGS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Store » Tim Cook kwuru Apple Store Melbourne bụ 'adịghị anakwere'
Apple Pay bịarutere Canada echi, November 17
Apple si French website na-eji ejiji na iru uju na nwa crepe na mkpuchi ya